Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Ny fidiram-bolan'i Boeing dia nihena efa ho 50 isan-jato hatramin'ny 2018
Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina iray manontolo dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny areti-mandringana tamin'ny 2020
Ny fidiram-bolan'i Boeing dia saika nihena hatramin'ny antsasaky ny taona 2018
Boeing dia mianjera ao ambadiky ny Airbus goavam-be mpanafika amin'ny baiko sy ny fandefasana
Nihena ny vidin'ny Boeing tamin'ny taona 2020 ho setrin'ny areti-mifindra COVID-19
Boeing dia iray amin'ireo orinasa lehibe indrindra manerantany, fa ilay goavambe fiaramanidina dia nanana korontana roa taona lasa izay. Na dia talohan'ny areti-mandringana Coronavirus tamin'ny taona 2020 aza dia efa niaina fihenam-bidy marobe tamin'ny metrika isan-karazany ny orinasa noho ny ady hevitra lehibe manerantany manodidina ny iray amin'ireo fiaramanidiny.
Araka ny angon-drakitra nataon'ny mpandinika indostrialy farany, Boeingny fidiram-bolan'ny $ 58.16 miliara tamin'ny taona 2020 dia fihenan'ny 42.5% raha oharina amin'ny fidiram-bola avo indrindra $ 2018 mihoatra ny $ 101 miliara - ny CAGR -24.16%.
Tamin'ny taona 2018 dia nanidina ambony i Boeing taorian'ny niampitana ny marika mitentina $ 100 miliara voalohany tamin'ny tantaran'ny orinasa. Na izany aza, tamin'ny faran'ny taona 2018 sy tamin'ny fiandohan'ny taona 2019, ny iray amin'ireo maodelin'ny fiaramanidina vaovaon'i Boeing, ny 737 MAX 8, dia niaina fianjerana roa tao anatin'ny 5 volana. Ireo lozam-pifamoivoizana roa ireo dia nahatonga ny fiampangana ny rafitra fanaraha-maso ny sidina MCAS vaovao an'ny Boeing ary niafara tamin'ny fametrahana ny sambo iraisam-pirenena manontolo ho an'ny 737 MAX ary najanona na nofoanana ny baiko ho an'ny maodely vaovao.
Vokatr'izany dia nihena 24% ny karam-bolan'i Boeing tamin'ny taona 2019. Mba hampitomboana ny krizy efa natrehan'i Boeing, dia voan'ny areti-mandringana COVID-19 izao tontolo izao tamin'ny taona 2020 izay niteraka fihemorana goavana ho an'ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany. Izany dia nahatonga ny fidiram-bolan'i Boeing hidina 24% YoY hafa amin'ny taona 2020. Nanomboka tamin'ny 2018-2020 dia nahazo CAGR -24.16% ny karaman'i Boeing
Ny indostrian'ny seranam-piaramanidina iray manontolo dia nisy fiatraikany lehibe tamin'ny areti-mandringana tamin'ny taona 2020. Firenena maro no nanidy ny sisintaniny mba hiarovana ny olom-pireneny amin'ny fanafihan'ny valanaretina ka nampijanona ny fivezivezena manerantany. Vokatr'izany, ireo mpamatsy fiaramanidina roa tonta dia nijaly tamin'ny fidiram-bola be tamin'ny taona 2020 niaraka tamin'ny fihenan'ny 37bus YoY.
Saingy, ny olan'ny Boeing dia nanomboka talohan'ny taona 2020 ary ny olan'ny fiarovana ny taona 2019 dia mbola mitarika any aoriana any Boeing Airbus amin'ny baiko sy fanaterana. Tamin'ny taona 2020, Airbus dia nanoratra kaomandy 383 lehibe raha oharina amin'ny Boeing's 184. Rehefa avy nanisa ny fanitsiana sy ny fanafoanana ny fifanarahana nifanaovan'i Boeing dia nilatsaka tamin'ny -1194 ho an'ny taona 2020, raha oharina amin'ny Airbus '268.
Tamin'ny taona 2020 Airbus koa dia nanolotra fiaramanidina efa ho 400 mihoatra ny Boeing, izay samy 566 sy 157 avy.
Amin'ny maha-endrika fanaraha-maso ny fahasimbana, Boeing dia nanangana hetsika fandaniam-bola vitsivitsy tamin'ny taona 2020. Ny Boeing dia nanapaka ny fandaniana R&D tamin'ny 23% YoY tamin'ny taona 2020 ny fizarana farany ambany indrindra hatramin'ny 2005. Boeing no mpampiasa lehibe kokoa an'ireo mpanamboatra fiaramanidina roa miaraka amin'ny mpiasa 141,000 ao 2020, aorian'ny fihenan'ny 20,000 2019 avy amin'ny XNUMX.